ဒါကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းမှကြွလာသောအခါ,ကောင်းသောပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်ခြင်းရိုးရှင်းပါသည်။ နည်းပညာရှုထောင့်မှမရိုးရှင်းပါ၊အကြောင်းမှာအလုပ်တွေအများကြီးရှိလို့ပါ။ သို့သော်သင်အလုပ်၌ထားနိုင်ပြီး၎င်းသည်စုဆောင်းမှုကိုဖန်တီးရန်ကြွလာသောအခါအချို့သောရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုမလိုက်နာပါကသင်၏ပလက်ဖောင်းသည်စို့သွားသည်။ သငျသညျအဖွဲ့ဝင်အင်္ဂါရပ်များနှင့်မီးတောက်အမှုအရာ၏အမျိုးမျိုးနှင့်အတူဤမျှလောက်များစွာသောတောက်ပညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုဒ်များကိုတွေ့မြင်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်,ဒါပေမယ့်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံမှကြွလာသောအခါ,သင်ရုံညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပယ်ပိုကောင်းပါတယ်., ကျနော်တို့တစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုဒ်ကိုကြီးစွာသောအသုံးပြုအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုထွက်နေသေးတယ်ကျနော်တို့ဂိမ်းညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်အရာအားလုံးကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာကျနော်တို့ရှိသည်ဂိမ်းအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖြစ်ကြ၏။ သူတို့ကကစားသမားသူတို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်သူတို့ကိုခံစားနိုငျဆိုလိုတာကသူတို့လည်းသာလွန်ဂရပ်ဖစ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုရ,ပေါင်းအနက်စိတ်ကြိုက်. ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ဂိမ်းများကိုကစားရကျိုးနပ်သည်။ အခြားဆိုဒ်များထက်နည်းပါးသောဂိမ်းများရှိသော်လည်း၊ကျွန်ုပ်တို့ရှိသောအရာအားလုံးသည်သင်လုပ်ဆောင်ချက်၌ပါ ၀ င်သည့်ဂိမ်းများသို့ရောက်လျှင်သင်သွားစေရန်အာမခံသည်။ ကျနော်တို့အဆုံးကနေအဆုံးအထိသူတို့ကိုယ်သူတို့စမ်းသပ်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဂိမ်းတွေဟာကစားရကျိုးနပ်တယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။, အများစုမှာဝက်ဘ်ဆိုဒ်၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဂိမ်းများ၏ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်စာကြည့်တိုက်ထဲမှာအမျိုးအစားများကိုပင်မသိရပါဘူး,အရာသူတို့အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းစက်ပစ်တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းမဟုတ်ပါဘူးပြေးနေသည်ဟုဆိုလိုသည်. ဒါပေမယ့်လုံလောက်တဲ့လိင်ဂိမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်၏အခြေခံမူဆွေးနွေးခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ဝင်ရောက်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်စကားပြောကြပါစို့။ အဘယ်သူမျှမရှိပါတယ်! ကျနော်တို့အခမဲ့လိင်ဂိမ်းကစားခြင်းပလက်ဖောင်းပြေး,ငါတို့ဆိုက်၏နာမတော်၌ထားခဲ့ပါသော်လည်း။ သူတို့ကစားခလုတ်ကိုထိလိမ့်မည်နှင့်ဂိမ်းရုံစတင်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါဧည့်သည်များထွက်တွက်ဆပါလိမ့်မယ်။ ဒီေတာ့ဂိမ္းအေၾကာင္းေျပာၾကရေအာင္!
ကောင်းမွန်သောညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုသင်ကစားနိုင်သည့်စျေးအကြီးဆုံးဂိမ်းများကမပေးထားပါ။ င်းသည်သင်နှစ်သက်ချင်သောအလွန်ကိုနှစ်သက်စေရန်တီထွင်ထားသောဂိမ်းများကပေးသည်။ အကယ်၍တည်ဆောက်သူသည်သင်နှင့်ပတ်သတ်သောမျှဝေခြင်း၊ထို့နောက်လွတ်လပ်သောဂိမ်းတစ်ခုသည်သင်္ဘောသားတစ်ဦးဖန်တီးသည့်ကြီးမားသောဘတ်ဂျက်ဖြင့်တစ်ခုခုထက်ပိုကောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကြိုက်အများဆုံးညစ်ညမ်းပြွန်များမှကူးယူထားသောညစ်ညမ်းအမျိုးအစားအားလုံးမှဂိမ်းများရှိသည်။ ပြီးတော့ငါတို့မှာလိင်ဂိမ်းကစားခြင်းလောကအတွက်တိကျတဲ့အမျိုးအစားအားလုံးရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်သင်သည်မည်သည့်အမျိုးသမီးအမျိုးအစားမဆို၊ဆယ်ကျော်သက်ဂိမ်းများမှကျောင်းသူကျောင်းသားများ၊ကလေးသူငယ်၊သို့မဟုတ်ပင်သမီးများနှင့်ညီအစ်မများသည့်အခါဆရာများ၊အမေနှင့်ရုံးလူကြီးများနှင့်ရင့်ကျက်သောဂိမ်းများကိုပါ ၀ င်သည်။
ကာတြန္း၊ကာတြန္း၊႐ုပ္ရွင္၊ပင္မေရစီးဗီဒီယိုဂိမ္းေတြနဲ႔ အတူပါလာမယ့္ပါ၀ါဂိမ္းေတြမွာေတာင္မပါ၀င္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြကိုေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ သင်ချစ်သောမိန်းကလေးများပင်မတည်ရှိရန်မလိုပါ၊သို့သော်၎င်းတို့သည်လူသားများဖြစ်ရန်မလိုပါ။ ကျနော်တို့ရုပ်ပြောင်အမျိုးအစားထဲမှာသငျသညျအကြှနျုပျ၏နည်းနည်းမြင်းကနေသူငယ်ကိုအပ်နိုင်ပေါင်း,ဂျက်စီကာယုန်နှင့်ပင်ယုဒဟာရီ,တိရစ္ဆာန်ရုံမှလိင်ဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်။
ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုက်မှာပေးတဲ့လိင်စုံဂိမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မတူညီသောအမျိုးအစားများစွာရှိသည်၊ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစားအမျိုးအစားများ၊စာသားအခြေပြုဂိမ်းများ၊စိတ်ကူးယဉ် ၀ တ်စုံများနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း၊သက်ဆိုင်သောဇာတ်လမ်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ၊ဇာတ်ကောင်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အချို့ယင်း၏ပန်ချီများတွင်ရယူခြင်းစသည့်မတူညီသောဂိမ်းအတွေ့အကြုံရှိသည်။
ဂိမ်းညစ်ညမ်းဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းအရာအားလုံးကိုဒါလွယ်ကူစေသည်တဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်လာမယ့်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစုဆောင်းမှုကိုလိင်ပြွန်ကဲ့သို့စုစည်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အညွှန်းသည်ဧည့်သည်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးအန်းဒရွိုက်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်သွားသည်။ တဖန်သင်တို့ပင်သင်ဂိမ်းကစားရှိရာစာမျက်နှာပေါ်တွင်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့သာဆိုက်နှင့်ဖိုရမ်အပေါ်မှတ်ချက်အပိုင်းများရှိသည်။ သူတို့အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မှမတောင်းပါ။ ငါတို့သည်လည်းအဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်နေစဉ်သင်နေသောအထဲကရှာတွေ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများမှစာဝှက်ထားတဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဆက်ကပ်။, ဂိမ်းအမာခံညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေနဲ့သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်စူးစမ်း။